Pfungwa yezvikoro zveMontessori neMontessori kindergartens
Kudzidza nemanzwiro ose - iyo inonzwa 1000 kuMontessori
Montessori zvikoro uye kindergartens muGermany
"Ndibatsire kuti ndizviite pachedu", chirevo cheMontessori - The Montessori pedagogy inodzokera kune pedagogue uye chiremba Maria Montessori. Ichi 1870 chakaberekerwa muItaly uye chakabva kumusha wakanaka pakati pepamusoro.
Mudzidzisi akadzidza uye akafamba zvakanaka, ainyanya kuzvipira kodzero dzevakadzi uye kodzero dzevanhu. Akashanda muchipatara nevana vakaremara mupfungwa, asi akawana kuti vaida chaizvo kudzidza uye kugamuchira, asi kusvikira panguva ino vakanga vasina pfungwa yakarurama.
Maria Montessori akava nemafungiro ezvinyorwa zvakananga kuti vana ava vabatsire vana kukura. Kubva pane izvi, Montessori kudzidzisa yakagadzirwa kwemakore. Chirevo chekutanga chekudzidzira kwose ndechekuzivikanwa kunonyatsoita murairo: Ndibatsire kuti ndiite ini ndoga!
Chii chinokonzera Montessori pedagogy?
Montessori pedagogy inoisa mwana pakati pezvidzidzo, mwana ndiye muvaki wezvake uye zvinokurudzirwa nenzira yemubairo uye kurangwa hazvidikanwe zvachose. Vana, maererano nevateveri veMontessori, vanoda kudzidza vari voga uye vari mukati mavari, sezvo pfungwa yekuzviisa munyika yevanhu vakura inogadzirisa.
Kubva pamafungiro aya, zvikoro zveMontessori zvinodzidzisa basa rakawanda risina basa uye zvidzidzo zvakazaruka. Zvidzidzo zvinopa mukamuri wemwana kuedza nekuwana ruzivo. Mwana ane matarenda ake ari mberi, inogadzirisa purogiramu yake yekudzidza uye inokura mumhanzi wayo. Asi, inongorayirwa kutevedzera zvinhu.
Semuenzaniso, muMessessori kindergartens, vana vanokurudzirwa kuisa tafura nekutarisa kakawanda uye pane imwe nguva vachiedza kuzvibatsira ivo pachavo.
Mhedziso yeMontessori inoparadzanisa kukura kwevana muzvikamu zvitatu. Chikamu chokutanga chehucheche (0-6 makore), chikamu chechipiri chemhuri (8-12 makore) uye kuyaruka (12-18 makore). Muzvikamu zvitatu zvitatu pfungwa dzinotora basa rinokosha, nokuti vana vane chido chekudavira, kubata uye kunhuhwira zvinhu zvose.
Kunzwisisa mupfungwa chaiye inofanirwa kunyanya muzvikoro zveMontessori uye chechiergergens. Kudzidza kwaizove kwakanyatsoitwa kuburikidza nemanzwi panzvimbo pezvinyorwa, saka kudzidzira kwaizova nani, vanoti vatsigiri. Nekusimbiswa kwemashoko aya, nyaya yekudzidza yakakonzerwa. Mumathematika, somuenzaniso, pearl misoro inoshandiswa kuita nhamba inonzwisisika, iyo, inooneka. Matombo emaparera ane zvigadziko zve 1000 anofananidzira nhamba yakakwirira uye anobvumira mwana kuti aenzanise zviri nani masikisi - kwete mumusoro chete, asiwo akanzwa.
MuGermany, nzvimbo dzakapoteredza 600 zuva rekuchengetedza dzinoshanda maererano nemafungiro aMaria Montessori. Pakutanga kwe2013 pane zvikoro zvekutanga zve 225 uye zvidzidzo zvepachikoro zve 156 zvinotevera mazano aya. Zvikoro zvizhinji zviri voga uye dzinoisa kukurudzirwa kwomwana pakati pezvinangwa zvavo.
Vatsoropodzi vazhinji vanoona kuchinja kubva kuchikoro chekutanga cheMontessori kuchikoro chesekondari sechinetso. Zvisinei, zvakaratidzwa munguva yakapfuura kuti vana havana matambudziko chero. Zviri mukati mechikoro hazvisi zvakasiyana neyechikoro chenguva dzose, asi nzira yakakosha, mwana wacho anodzidza sei zviri mukati.
Basa rakasununguka, sarudzo yevamwe, basa reboka, ruzivo rwakasununguka nemukana wakawanda wekufambisa, nguva yako ndeyezvimwe zvezvinhu zvinowanikwa muzvikoro zveMontessori. Pakupedzisira, mwana wacho anobatsirwa nezviyero izvi nokuti anodzidza kushanda nesimba.